Kedụ ka m ga esi esi ziga ahịa na Blog m? Okporo ụzọ ka Mgbakwunye
Naanị otu esi eme ka m zube ahia na Blog m?
Determined kpebisiri ike ịkọwapụta nkọwa gị na niche na mgbakwunye na ịmalite ide ihe mmụta yana yana bara uru na ebe nrụọrụ weebụ ị ga-enweta nke ọma ị ga-enwe ike ịba uru lekwasịrị ahịa yana ịrapara n'ahụ. Ebe nrụọrụ weebụ gị okporo ụzọ ọnụ ọgụgụ nwekwara anya na mba. Ọfọn, ị chọrọ ịghọta na ịkwesịrị ịkwụsị ịntanetị website okporo ụzọ!
09/23/2021 02:10 elekere GMT
Dị ka ọ dị, ndị na-ede blọgụ, ọkachasị ndị na-anaghị akwụsi ike na stats websaịtị stats, amaghị maka etu ha ga - esi nweta nke ahụ pụtara websaịtị. Nnukwu azụmahịa nke ndị nwe ụlọ na-atụkwasị obi na saịtị na-adabere na ugbu a na-amaghị na-echegbu onwe ha banyere mkpa ọ dị ị na-aga ntanetị na ebe nrụọrụ weebụ yana yana kpọmkwem otu esi etinye na ntanetị n'ịntanetị Enwere ihe dị iche na-agbanwe nke na-esogbu gị mgbe mmadụ enweghị ike ilekọta ihe ị na-ele anya.
Ide blọgụ saịtị nwere ike ịbụ Akụ
Ọ bụrụ na ị na-ume na blog saịtị ide, ị nwere ike maa arụmọrụ gị mkpọsa nakwa dị ka N'otu aka ahụ na-eme ka ya ihu ọma. Ọ bụrụ n ’ị na-ekweta ihe ị na-atụ anya ime, emesịa, ị ga - azụrịrị onwe gị ma mechaa mebe iwu gị.
Nchegbu ahụ dị n'okpuru ebe a bụ, naanị otu ị ga - esi wepụta ịntanetị okporo ụzọ weebụsaịtị maka ebe nrụọrụ weebụ gị. Buru n'uche na nnukwu ọnụọgụ nke ịntanetị na ntanetị bụ ihe ị na - akpọ ka ị mee ka websaịtị gị rụọ ọrụ nke ọma. Iji gbanwee nghọta gị ka ọ bụrụ nke na-akwụghachi ụgwọ ego yana yana azụmaahịa a na-ahụ anya, chekwaa ndụmọdụ ndị a n'uche.
Nwee ụdị ndebanye aha e-mail maka websaịtị weebụ gị kwadebere. Ọ na-ewe ịkpọ ndị mmadụ na netwọkụ gị ịdenye aha. Nwere ike ịmalite na onye ị hụrụ n'anya, ndị mmekọ, ndị enyi, ndị na-azụ ahịa, yana pals.
Gụọ, rube isi, na mgbakwunye na ikwu okwu banyere weebụsaịtị dị iche iche ndị ọzọ na ebe nrụọrụ weebụ nke dị na ntanetị ị lekwasịrị anya. Hụ ya iji mee ka ọ dị mma, na-adọrọ mmasị, yana yana ihe amamihe dị na ya dịka ha ga-enyo enyo na saịtị gị. Achọrọ ka ị vidio vidio ndị nwere mmasị na ndị ọzọ, ha nwere ike ịgbakwunye njikọ ịntanetị na ọrụ nke gị.
Jiri Ping-O-Matic rụọ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ dị ka weebụsaịtị websaịtị mgbe ọ bụla ị malitere.
Zipu websaịtị saịtị gị na ntanetị na ntanetị n'ịntanetị yana mgbakwunye weebụsaịtị websaịtị weebụsaịtị. Ọtụtụ n'ime ha na-abịa n'efu n'oge a.
Echefula iso internet njikọ gị na ebe nrụọrụ weebụ na ebe nrụọrụ weebụ na ozi ịntanetị ị na-enye.
Na-ejikarị njikọ ịntanetị ugboro ugboro na ntanetị ịntanetị ma ọ bụ ụdị akwụkwọ ozi ọ bụla ị na-eweta yana ịgbakwunye. Mee nke a na ụdị mmekọrịta niile ị guzobere.
GỤRỤ AHỤ I Kwesịrị Zụrụ Okporo ụzọ ezubere iche?
Ọ bụrụ n ’iji aka, kaadị azụmaahịa, yana broshuọ ndị ọzọ maka usoro mgbasa ozi na azụmaahịa, gbaa mbọ hapụ URL nke weebụsaịtị gị.
Ọ na-emeghe iji nweta URL ndepụta RSS nke ndị mmadụ nwere ike ịdebanye aha maka nkasi obi.
Buru n'uche ịhapụ mmelite na ebe nrụọrụ weebụ gị iji webata ọtụtụ ndị ahịa.
Webata ihe ndị a na mmemme gị ga-enyere gị aka nnukwu ego na ire ahịa weebụsaịtị gị. Ọ bụghị naanị nke ahụ, n'agbanyeghị nke ahụ ị gbadoro mgbasa ozi weebụ saịtị!
Developed mepụtara nkọwa gị otu niche yana ị bidoro ide ihe mmụta yana ịba uru weebụsaịtị webụ nke ị bara uru ga -emepụta ahịa ebumnuche yana ịgbakwunye. Ajụjụ edepụtara n'okpuru bụ, kpomkwem ka ị ga - esi mepụta ahịa weebụ maka ebe nrụọrụ weebụ gị. Cheta na ọnụọgụ ọnụọgụ ntanetị nke ịntanetị bụ naanị ihe ịchọrọ iji mee ka websaịtị web gị bụrụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi. Nwee ụdị ndebanye aha email maka weebụsaịtị websaịtị gị niile. Gụọ, soro, yana mgbakwunye okwu banyere ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ nke ndị ọzọ dị n'ime iche gị ụfọdụ niche.